Aluminium Nahita Blade, Pcd Saw Blade, Diamond Saw Blade - Kenita
Foshan Kenita nanapaka Fitaovana Co., Ltd. matihanina no mpanamboatra ny firaka mafy tsofa boribory lelany. Tsofa boribory izahay, ka mamoaka lelany amin'ny kalitao avo-tsofa fitaovana famokarana vary, Luxembourg ny firaka mafy sy alemà 75crL vy sy ireo takela-kalitao avo fitaovana. Kenita tena mahatonga tsofa lelany, aluminium fanapahana tsofa lelany, vy fanapahana tsofa lelany, multi-lelan-tsabatra tsofa lelan-tsabatra, mafy hazo fanapahana tsofa lelany, gitara fanapahana tsofa lelany, vy fanapahana tsofa lelany, acrylic fanapahana tsofa lelany sy ny tsy faneva tsofa lelany, izay dia be nampiasaina tamin'ny fanaka, aliminioma sy ny fitaovana orinasa.
Aluminium Nahita Blade 16inch 405X3.5X25.4X80T
Aluminium Nahita Blade 14inch 355X3.2X25.4X80T
Aluminium Nahita Blade 12inch 305X3.2X25.4X80T
Kenita aluminium tsofa lelany dia atao amin'ny Nohafarana aluminium, izay mateza sy ny fahombiazan'ny avo. Ny vokatra rehetra dia vokatry ny tsofa sy ny fanapahana sy hamiratra brushless. Fampiharana: varavarana, varavarankely, lamba rindrina aliminioma, aluminium tsorakazo, aluminium tontonana, orinasa aliminioma, Ultra-manify aluminium, aluminium fanaka, hafanana hilatsaka sy ny sisa.
Feon'ireo Saw vary
Kenita feon'ireo tsofa lelany dia atao amin'ny avo-kalitao firaka sy tena ratsy, izay manana ny mampiavaka avo fametrahana mazava tsara fanapahana, Kendreo tapaka, malama tapaka, ambany tabataba sy ny fotoana ela velona. Fampiharana: bosoa maina, hazo mafy, MDF, gitara, hazo-monina tontonana, kobany hafa tsy mitovy ara-nofo sy ny volotsangana vokatra.
Manaova ny hamolavola Machine
Vonona ny hamorona ny vaovao mitsangana Haas bary?
Aoka hojerentsika ny marina milina ho an'ny tsena, ary ataovy anao manokana amin'ny alalan'ny fanampiana ny safidy sy ny lafin-javatra asa ho anareo.
Adiresy: No. 2, Industrial Road, Bijiang Industrial Zone, Beijiao Town, Shunde District, Foshan, Guangdong, Sina